तपाईंको कान त ठीक छ ? लापरवाहीले गर्दा नसुन्ने बनाउला ! – Waikhari
गृहपृष्ठ जीवन शैली तपाईंको कान त ठीक छ ? लापरवाहीले गर्दा नसुन्ने बनाउला !
तपाईंको कान त ठीक छ ? लापरवाहीले गर्दा नसुन्ने बनाउला !
काठमाडौं । पक्कै पनि, कानले कम सुन्न थाल्यो या पटक्कै सुन्न छोडयो भने कानमा गडबडी भएको हुनसक्छ, यसतर्फ सजग हुनैपर्छ । किनकी, शरीरका प्रमुख अंगमध्ये कान पनि एक हो । कान नै त्यस्तो अंग हो, जसबाट हामीले आवाजको अनभूती गर्नसक्छौं । अर्थात चारैतिर गुंजने ध्वानी हामी सुन्न सक्छौं । चरा कराएको होस् या मान्छे बोलेको, हामी कानले सुनेर नै थाहा पाउँछौं । मानिसहरुवीच सँवाद गराउने एक महत्वपूर्ण इन्द्रीय भनेको कान नै हो ।
कसैले केही भन्यो, तर तपाइले बुझुनुभएन ।
सोध्नुभयो, ‘हँ के भन्यौ, फेरि भन न, मैले त पटक्कै बुझिन ।’
‘दश चोटी भनिसकें, राम्ररी सुन्ने हैन, कान जँचाउन जाउ’, ती मित्रले सायद यसै भन्लान् ।
कानका मुख्य तीन भाग हुन्छन्, बाह्य, मध्य र भित्री कान । हाम्रो कानको बाहीरी भाग कार्टिलेजले बनेको हुन्छ, जलाई ‘पिन्ना’ भनिन्छ । कमलो लचकदार मासुले बनेको बाहीरी कान जुन हामीले देख्दै आएका छौं । बाहीरको ध्वनी कानको माइकजस्तो बाहीरी भागमा ठोक्किएर एउटा सुरुङजस्तो अँगबाट भित्र छिर्छ, त्यस अँगलाई ‘अडिटोरी मियटस्’ भनिन्छ । त्यहाँबाट अघि बढेको ध्वनी एयर ड्रमसँग ठोक्किन्छ र त्यसमा कम्पन सुरु हुन्छ । एयर ड्रम एउटा पातलो झिल्लीले बनेको हुन्छ, जसलाई हामी कानको जाली पनि भन्ने गर्छौं ।
यो जालीमा कम्पीत हुँदै ध्वनी तरँग मध्य कानतर्फ लाग्छ । मध्य कान खासमा भित्री कान र बाहीरी कानवीचको एउटा पुल हो, जहाँ तीनवटा स-साना हड्डीहरु हुन्छन् । ‘मेलियस’, ‘इंकस’ र ‘स्टेपस’ नाम गरेका ति स-साना हड्डीहरुसम्म पुगेपछि ध्वनी अझ कडा ढँगले कम्पीत हुँदै भित्री कानतर्फ बढछ । भित्री कानमा ‘कोकलीया’ नाम गरेको हाडले बनेको खोक्रो कक्ष हुन्छ । कोकलियाभित्र पनि तिनवटा घुमाउरा टयूबहरु हुन्छन्, जसलाई ‘स्केल भिस्टेब्यूल’, ‘स्केला मिडिया’ र ‘स्केला टेम्पेनी’ भनिन्छ ।
यी टयूबका भित्ताहरुमा ‘बेसीलर मेम्ब्रेन’ हुन्छ, जसमा स्नायु कोषहरु हुन्छन् जसलाई ‘अर्गेन अफ कोर्टी’ भनिन्छ । यहाँ रहेका हेयर सेल्सहरुले ध्वनी तरँगलाई ‘इलेक्ट्रीकल सिग्नल’मा परिणत गरीदिन्छन् । यी इलेक्ट्रीकल सिग्नलहरुलाई ‘अडिटरी नर्भस्’ले मश्तीस्कसम्म पुर्‍याउँछ । जब मश्तीष्कले त्यसलाई स्वीकार गर्छ, तब हामी त्यो आवाज सुन्न थाल्छौं । अचम्मको कुरा, यति लामो प्रकृया सम्पन्न हुन एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन । यो प्रकृया कति तिब्र गतिमा हुन्छ भने बाहीर कोही बोल्नासाथ हामी तत्काल सुनीहाल्छौं ।
हो, कानको यही प्रकृयामा गडबडी आउँदा हाम्रो श्रवण शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ । सुरु सुरुमा श्रवणशक्ति कमजोर भएको खासै हेक्का हुँदैन । काम चलुञ्जेलसम्म वास्ता पनि हुँदैन, तर समस्या भित्र भित्र चर्किसकेको हुन्छ । जबसम्म हामीलाई कान कमजोर भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेलासम्म शरीरको ३० प्रतिशत कोषिका नष्ट भईसकेको हुन्छ । जुन फेरि उत्पन्न गराउन असम्भव छ । त्यसैले कानको समस्या हुनुपूर्व नै बहिरोपनको लक्षणबारे जान्न आवश्यक छ ।
कानमा सिटी बज्नु
फोनमा कुराकानी गरिरहेको बेला वा अचानक कानमा सिटी बज्न थालेमा यसलाई हल्का रुपमा नलिऔं । यो कान सम्बन्धि समस्या ‘एकास्टिक न्यूरोमा’को लक्षण हुनसक्छ । यसलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा बहिरोपनाको समस्या हुनसक्छ ।
एकास्टिक न्यूरोमा एक प्रकारको ट्युमर हो, जसले क्यान्सर गराउँदैन, तर पनि यसले श्रवण क्षमतालाई कम गर्दै लगेर कहिलेकाही पटक्कै नसुन्ने बनाइदिन्छ । यसले अन्य थुप्रै गम्भीर समस्यासमेत उत्पन्न गर्छ । तर यहाँ समस्या के छ भने यस्तो लक्षण सजिलै देखिदैन र जबसम्म देखिन्छ , निकै ढिलो भइसक्छ ।
कानबाट पानी बग्नु
बारबार कानबाट पानी बग्नु पक्कै पनि सामान्य हैन । लामो समयसम्म कानबाट पानी बगिरहेमा बहिरोपना हुनसक्छ । वर्षमा ४-५ पटक भन्दा बढी टंसिल भएमा, धेरै चिसो महसुस भएमा, नाकले भन्दा मुखबाट धेरै सास लिनु परेमा र कान दुख्ने समस्या भइरहेमा त्यो कानकै समस्या हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा यथाशिघ्र चिकित्सकसित परामर्श लिनु जरुरी हुन्छ ।
कानभित्र एक प्रकारको तैलिय पदार्थ बनिरहेको हुन्छ, जसलाई चिकित्सकिय भाषामा ‘सिटोमिन’ भन्ने गरिन्छ । यसले कानमा जमेर बसेका फोहरलाई निकाल्ने काम गर्दछ । कानमा सिटोमिन बन्न कम भएमा वा बन्द भएमा कानमा फोहर जम्न सुरु हुन थाल्छ, जसलाई कानेगुजी भन्ने गरिन्छ ।
कानुगुजी सुकेमा कानमा ढुसी वा पिप बन्न सुरुहुन्छ । यदी यसमा लापवाही गरेमा पिडितले कम सुन्न थाल्छ । कानको पर्दामा दुलो पर्न थाल्छ । ज्वरो तथा अन्य संक्रमणका कारण पनि कानको पर्दामा प्वाल पर्ने गर्छ ।
कान रातो हुनु
पिन तथा चावीले कान कान कोट्याउने, कन्याउने तथा असुरक्षित पद्धतिद्धारा कानमा प्वाल पारेमा संक्रमण हुने गर्छ । क्रिम, तेल र अन्य औषधीको उपयोगका कारण कानमा एलर्जी भएर पनि कानको संक्रमण हुने गर्छ । संक्रमणका कारण कान रातो भई चिलाउने तथा कान दुख्ने गर्छ ।
कानमा जमेको मयल, टाउकोमा लागेको चोट, कानको पर्दा खराब भएमा पनि कानमा समस्या आउनसक्छ । त्यस्तै, परिवारका सदस्यामा बहिरोपनाको समस्या हुनु, गर्भावस्थामा हुने संक्रमणका कारण पनि कानमा समस्या आउन सक्छ । यस्ता समस्या भएमा तुरुन्त चिकित्सकसित सम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ ।
कानको सफाईः एक भ्रम
धेरै मानिसहरुलाई एउटा भ्रम छ, कानको सफाइ गर्ने । चिकित्सकहरुका अनुसार हाम्रो शरीरका अरु सबै अँगको सफाइ जरुरी रहे पनि कान नै एउट यस्तो अँग हो, जसको सफाइ जरुरी छैन । कानको बाहीरको लचिलो भाग त मुख धुँदा या नुहाउँदा नै सफा भइहाल्छ, त्यहाँभन्दा भित्र छेस्कोमा कपास बेरेर कान सफा गरीरहनु जरुरी छैन । कानभित्रै ‘रोलीङ मेथड’द्वारा कानेगुजीलगायतका फोहरलाई सुख्खा बनाएर बाहीर फाल्ने जैविक तारतम्य मिलेको हुन्छ । कानले आफै आफ्नो सफाइ गर्ने भएकाले कानको अतिरिक्त सफाइ जरुरी नभएको नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
कान बचाउन सावधानी
कानको सुरक्षाका लागि केही सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । कानमा पानी पटक्कै पार्नुहुन्न । तेल पनि हाल्नुहुन्न । कानको जुन जाली छ, त्यो सुख्खा रहनुपर्छ, अनि बल्ल त्यसले कम्पीत ध्वनीलाई भित्रसम्म पुर्‍याउँछ । पानी या तेलले विस्तारै त्यो झिल्ली कमजोर भइ प्वाल पर्नसक्छ । नुहाउँदा कानमा कपास या ‘एयर प्लग’ लगाएर नुहाउनुपर्छ ।
कान कोटयाउने बानी बडा खराब बानी हो । हुन त लुतो कन्याउँदा र कान कोटयाउँदा मानिसलाई बडो आनन्द महसुस हुन्छ । सुरुमा चिलाएको कान कोटयाउँदा आनन्द आए पनि कान कोटयाइरहँदा भित्रका सुक्षम झिल्ली र कोषहरुमा दखल पर्न गइ कानभित्र घाउ हुन थाल्छ र त्यसले कानको जालीमा असल गर्छ । अतः जसरी नङ टोक्ने बानी नराम्रो हो, त्यसैगरी चराको प्वाँख या कपास बेरीएका छेस्काहरुले कान कोटयाउनु पनि नराम्रो बानी नै हो ।
अचेल मोबाइल फोनमै सारा सँसार अटेको छ । फिल्मदेखि गित सँगीत सबै मोबाइल सेटमै हुन्छ । कानमा एयरफोन राखेर गीत सुन्न त मजा आउँछ, तर त्यसको भोलुम अली कम गरेरै सुन्नु जरुरी छ । एयरफोनमा फुल साउण्ड गरेर गीत सुन्दा त्यसको फ्रिक्वेन्सीले सोझै हाम्रा भित्री कानलाई असर पार्न सक्छ । चर्को ध्वनी कानको लागि हानीकारक छ । यही कारण चर्को गीत घन्कीएरहेका स्टेज शोमा जानुभयो भने अली वरै रहेर त्यसको मजा लिनुहोला । चुनावी भाषण भइरहेका छन् भने पनि अली वरै रहेर र सकेसम्म माइकको नजिक नबस्नुहोला ।पढी सकेर साथीलाई सेयर गर्नुहोला
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन, सरकारसँग लिखित जवाफ माग
दृगनारायण पाण्डेयले लिए राष्ट्रिय सभाध्यक्षसमक्ष शपथ
गायक दीप श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधारभएपछि अक्सिजनको सहायताबाट निकालियो
उत्तर प्रदेशको कानपुरमा भयावह दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु
कर्णालीका मन्त्री थापालाई बर्खास्त नगरे एमालेले संसद् चल्न नदिने